Yay ahaayeen masaaridii hore? Dr. Abdullahi Hassan Mohamud (Abdullahi Spanish)
Su�aasha aan cinwaanka uga dhigay maqaalkan ma aha mid si fudud looga jawaabi karo. Run marka arrinka laga sheegona weli cid ay wax wadaageen iyo cid ay ahaayeen oo la isla oggolaaday ma jirto. Laakiin, taariikhda marka dib loo raaco labadii qarni ee u dambeeyey waxa adduunka loo soo bandhigay ilaa siddeed iskuday (aragtiyood) oo la isku deyey in su�aalahaas lagaga jawaabey.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Haddaba, iyada oo ujeeddadaydu tahay in aan u fududeeyo ciddii rabta in ay hoos ugu daadegto, ayaan halkan ku soo guuriyey magacyadooda: �Caucasian race hypothesis, Indian hypothesis, Hamitic hypthesis, Dynastic race hypothesis, Black afrikan hypothesis, Turnid race hypothesis, Mediterranean brown race hypothesis iyo Asiatic race theory�. Guud ahaan aragtiyahan meel jeclaysi iyo midab-takoor baa gun iyo aasaasu ah, mid keliya oo ilaa hadda baadidoonkii lagaga nastayna kuma jirto.
Waqtigan xaadirka ah waxa weli waddoonyinkas qaar ku jooga oo loolan aad u xoogani ka dhexeeyaa laba qolo oo mid waliba aragti dhanka ay jeceshahay wax u xaadhaysa wadato. Waxa lagu kala magacaabaa, �Afro-centrists� iyo �Euro-centrists�. Qolada hore waxay qabtaa oo ku dooddaa in wixii aqoon iyo awood Masar ka muuqday iyo guud ahaan i